The Donnersmarck Diamonds: Sotheby's ရှိစင်မြင့်ပေါ်ရှိအချစ်ဇာတ်လမ်း
'The Donnersmarck Diamonds' ဟုလူသိများသောအဝါရောင်စိန်ပွင့်တစ်စုံ။ ပါရီရှိအကျော်ကြားဆုံး courtesans များထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည့် La Païva၏ရတနာစုဆောင်းမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်း၏ထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဖြစ်သည့် Sotheby's ၏အံ့ဖွယ်ကျောက်မျက်ရတနာများနှင့် Noble Jewels တွင်ဂျနီဗာရှိနိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင်လေလံတင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ Donnersmarck စိန် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောသမိုင်းဝင်သက်သေပြနှင့်အတူရှားပါး Fancy ပြင်းထန်သောအဝါရောင်စိန်နှစ်ခုရှိသည်။
ယခင်ကမင်းသားမိသားစုဗွန် Donnersmarck ၏စုဆောင်းမှု၌ဤကျောက်မျက်နှစ်ခု, တစ် ဦး ထားရှိရေး ၁၀၂.၅၄ ကာရက်အလေးချိန်ကူရှင်ပုံသဏ္diamondာန်စိန်နှင့် သစ်တော်သီးပုံသဏ္diamondာန်စိန်မှာ ၈၂.၄၇ ကာရက်ရှိသည်, သူတို့သည်အဖြစ်လေလံတင်မှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ် တစ်ခုတည်းစာရေး။ အဆိုပါ ရောင်းရငွေခန့်မှန်းချက်မှာ CHF 8,8-13,7 million ဖြစ်ပါတယ် ($ 9,031,131 - 14,043,870 ခန့်) ။
GIA အစီရင်ခံစာပါ ၀ င်သည်။ ၁၀၂.၅၄ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောစိန်သည် Fancy Intense Yellow၊ သဘာဝအရောင်၊ SI15814849 Clarity ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူမျှမ။ အလေးချိန် ၈၂.၄၇ ကာရက်ရှိအလေးချိန်ရှိသောစိန်မှာ Fancy Intense Yellow၊ သဘာဝအရောင်၊ VS102.54 Clarity ဖြစ်သည်။
Blanche Thérèse Lachman, la Païva, Countess Guido Henckel von Donnersmarck (1819-1884),
Katharina Wassilievna de Slepzoff, Countess Guido Henckel von Donnersmarck (၁၈၆၂-၁၉၂၉)၊
တစ်ချိန်က Donnersmack စိန်များသည် ၁၉ ပါးအနက်မှတစ် ဦး ဖြစ်သော La Païvaကိုစုဆောင်းသည်th ရာစုနှစ်အကျော်ကြားဆုံး ခန္ဓာကိုယ်.
Countess Henckel von Donnersmarck (၁၈၁၉ မှ ၁၈၈၄) ကို Marie-Alexandre Alophe က ၁၈၆၀ ပြည့်နှစ်များတွင်ရိုက်ကူးခဲ့သည်။
၁၈၁၉ မော်စကိုတွင် Est သတာ Lachman မွေးဖွားခဲ့သည်သူသည်နှိမ့်ချသောဇစ်မြစ်မှဆင်းသက်လာပြီး ၁၈၃၇ ခုနှစ်တွင်ပဲရစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏နှစ်သက်ဖွယ်ရာများကိုသုံးပြီးပါရီမြို့၏မြင့်မားသောလူ့ဘောင်သို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ Richard Wagner၊ Hans von Bülow၊
၁၈၅၁ တွင်အက်စတာသည်ပေါ်တူဂီက Marquis Albino Francisco de Araújo de Païvaနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည် ဒီတစ်ရက်လက်ထပ်မှုကြောင့်သူမသည်ဥရောပမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်အသိုင်းအ ၀ ိုင်းတွင်လူသိများလာသည်။လာပဗာ.
၁၈၅၅ တွင်အက်စတာသည် Guido Count Henckel von Donnersmarck နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ Guido သည် ၂၂ နှစ်အရွယ်ပရင့်စ်စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်နှင့်သတ္တုတွင်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးမြို့၏ဟောပြောချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ La Païva၏ဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှု၊ သွက်လက်သောစိတ်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုစွဲစွဲထားသည့် Count သည် ၁၈၇၁ အောက်တိုဘာ ၂၈ တွင်သူမနှင့်လက်ထပ်ခဲ့သည်။
၁၈၅၁ တွင်ပုံဖော်ခဲ့သော Guido Henckel von Donnersmarck (1830-1916) Count ။
၁၈၅၅ တွင် La Païvaသည် Champs Elyséesတွင်မြေကွက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်ဗိသုကာလူငယ်တစ် ဦး ဖြစ်သော Pierre Manguin နှင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခဲ့သည် အများဆုံးခမ်းနားထည်ဝါစွာနှင့်ခမ်းနား၏တ ဦး တည်း အထူးသဖြင့်ဟိုတယ်များ Paris တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောဟိုတယ်ဒီလာပါဗာ.
Hôtel de la Païva, ပဲရစ်။ Traveller ကလပ်၏ပုံရိပ်ကိုယဉ်ကျေးစွာဖြင့်ဖော်ဆောင်နိုင်သည်
၁၈၆၆ ခုနှစ်ခန့်တွင် Guido von Donnersmarck နှင့် La Païvaတို့အိမ်အသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါ Count သည်လည်း ကျေးလက်အိမ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ Pontchartrain château၁၆ ရာစုရဲတိုက်သည်ပဲရစ်မြို့အနောက်မိုင် ၂၀ အကွာတွင်တည်ရှိသည်။
Chateau de Pontchartrain, ပြင်သစ်© http://www.all-free.photos.com
၁၈၇၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင်ပြင်သစ်သည်ပရက်ရှားများကိုစစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ လာပါဗာသည် Silesia အထက်သို့အငြိမ်းစားယူခဲ့သည်။ မိသားစုရဲတိုက်ဟောင်းနှင့်နီးသော Neudek ဥယျာဉ်တွင်ပြင်သစ်ဗိသုကာပညာရှင် Lefuel သည်အဆောက်အ ဦး အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ စစ်အပြီးတွင်မကြာမီတွင်ထိုစုံတွဲသည်ပဲရစ်သို့ပြန်သွားပြီးလက်ထပ်ခဲ့သည်။
မှတ်သားဖွယ်အကောင်းဆုံးမှာသူမသည်ထိုစဉ်ကရှိခဲ့ဖူးသောအံ့ဖွယ်ဖန်တီးမှုအချို့ကိုရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည် Boucheron ၏မကြာခဏ client ကို, အဘယ်သူ၏မော်ကွန်းတိုက်, ဗင်းဆင့် Meylan ရဲ့တှငျဖျောပွထား စာအုပ်, ဒီလေလံပွဲမှာကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့ ၁၀၀ ကာရက်ကူရှင်ပုံစံစိန်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ ယခု Countess Henckel von Donnersmarck, La Païvaသည်၎င်းကို 1882 ခုနှစ်တွင်ရတနာအိမ်မှဝယ်ယူခဲ့သည်။
လပွတ္တာသည် ၁၈၄၄ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် Neudek တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည် နှင့် Count သည်စိန့်ပီတာစဘတ်တွင်မွေးဖွားသည့် Katharina Wassilievna de Slepzoff (1887-1862) နှင့်လက်ထပ်သည့်အခါ ၁၈၈၇ ခုနှစ်အထိမုဆိုးဖိုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။
မင်းသမီး Katharina Henckel von Donnersmarck (1862-1929)
သူမသည် La Païva၏ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားပြီး Katharina ၏စုဆောင်းမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်သူမ၏ရတနာများ မှလွဲ၍ ကျန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်ထိုစိန်နှစ်ချောင်းသည် La Païvaမှ Count von Donnersmarck ၏ဒုတိယဇနီးသို့ကူးသွားခဲ့ပြီး Sotheby's Geneva တွင်ရောင်းချခဲ့သည့် ၂၀၀၇ ခုနှစ်အထိရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်အထိ Donnersmarck မိသားစုတွင်ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ Donnersmarck စိန်
၏စကားများတွင် Sotheby's International Jewellery Division ၏ Worldwide ဥက္ကChairman္ဌ David Bennet:
"ဒီရင်သပ်ရှုမောဖွယ်စိန်တွေကသူတို့နဲ့အတူစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုသယ်ဆောင်ထားပါတယ်။ Manon Lescaut ကနေ La Traviata အထိအကြီးမားဆုံးသောဝတ္ထုများနှင့်အော်ပရာအချို့ကိုစိတ် ၀ င်စားစေနိုင်သည့်အခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်သောအချစ်ဇာတ်လမ်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားမှုများပါ ၀ င်သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ကသူတို့ဟာဂျနီဗာမှာရှိတဲ့ Noble Jewel ကိုရည်စူးပြီးပထမဆုံးအကြိမ်ရောင်းချခြင်းကိုပြသခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကပြပွဲရဲ့ကြယ်ပွင့်တွေပါ။ ဤထူးခြားသောစိန်များကိုထပ်မံတင်ဆက်ခြင်းဖြင့်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအောင်မြင်မှုရရန်ကျွန်ုပ်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ တော်ဝင်မင်းသမီးများနှင့်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်ဇာတိကျောက်မျက်ရတနာများသည်အထူးသမိုင်းကြောင်းကိုသယ်ဆောင်လာပြီး၎င်းတို့သည်ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ။ နို ၀ င်ဘာလတွင်လေလံတင်ရောင်းချခြင်းသည်တစ်စုံတစ် ဦး အားထူးခြားသောရှားပါးသောကျောက်မျက်ရတနာများဝယ်ယူရန်အခွင့်အလမ်းပေးလိမ့်မည်။
The Donnersmarck စိန် - ပြပွဲပြက္ခဒိန်
စင်္ကာပူ: ၂၀-၂၁ အောက်တိုဘာ
ဟောင်ကောင်: ၂၃-၂၄ အောက်တိုဘာ
ထိုင်ဝမ် - ၂၆-၂၇ အောက်တိုဘာ
နယူးယောက်: 3-4 နိုဝင်ဘာ
ဂျီနီဗာ: 11-14 နိုဝင်ဘာလ
Tags:လလေံပှဲ • သမိုင်းရတနာ • Sotheby ရဲ့ • စိန်အဝါရောင်
“ မှတ်ချက် ၁ ခုThe Donnersmarck Diamonds: Sotheby's မှာစင်မြင့်ပေါ်ကအချစ်ဇာတ်လမ်း"
Pingback: စိန်ဒဏ္legာရီများ - Le Grand Mazarin | HIGH ရတနာအိပ်မက်